Cristiano Ronaldo Waa Xiddiga Ugu Naraxiista Badan Kubada Cagta
Caawinta Falastiin, Dhiiga Iyo Dhuuxa Uu Ku Deeqo Iyo 18 Arimood Oo Cristiano Ronaldo Ka Dhigaya Xiddiga Ugu Naxariista Badan Dunida
September 20, 2019 Balaleti 5
Cristiano Ronaldo waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican caalamka, waana xiddiga ugu naxariista badan kubada cagta, waxa uu ku guuleystay shan Ballon d’Or taasoo ka marqaati kaceysa heerka tayadiisa.
Inta badan waxaa lagu eedeyaa marka uu garoonka ku jiro ruux la ciyaara taribuunka laakiin xaqiiqdii Ronaldo waxaa lagu tilmaami karaa xiddigaha ugu saqisan kubada cagta uguna naxariista badan marka la eego waxyaabihii uu sameeyay.
Waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa 18 arimood oo Ronaldo ka dhigaya xiddiga ugu naxariista badan kubada cagta, sida ay qortay The Sun
1. Kabtiisa Dahabka Ee Yurub
Ronaldo ayaa go’aansaday inuu iibiyo kabtii dahabka ee Yurub ee uu ku guuleustay sannadii 2011, iyadoo lacagta lagu helay xaraashka kabtaas oo gaareysa 1.2 milyan ginni iskuulo cusub looga dhigay marinka Gaza ee dalka Falastiin.
2. Ballon d’Or oo u bedeshay xiddiga ugu naxariista badan
Abaalmarin kale oo uu iibiyay Ronaldo, bedelkii uu heysan lahaa, Ronaldo ayaa iibiyay mid ka mid ah shanta Ballon d’Or ee uu ku guuleystay iyadoo lacagtii lagu iibsaday oo gaareysa 530 kun ginni uu ugu deeqay hay’ada caawisa caruurta xanuunsan ee Make-A-Wish Foundation. Waxa uu madxafkiisa dhigay Ballon d’Or koobi kale ah oo aan aheyn midkii uu iibiyay.
34 jirkaan waxa uu ambasadoor u yahay oo uu caawiyo seddex hay’adooda oo dadka caawiya oo kala ah: Save the Children, Unicef iyo World Vision, taaso ka dhigeysa xiddiga ugu naxariista badan
4. Lacagtiisa abaalmarinta
Ronaldo ayaa ku deeqay lacagtii boqolka kun euro ee uu ka helay inuu ka mid noqday kooxda sannadka ee UEFA Team of the Year 2013 hay’ada Laanqeyrta Cas, halka uu 12 bilood ka dib lacagtii abaalmarinta ee uu ka helay Real Madrid ee ku guuleysiga La Decima oo gaareysay 450 kun ginni uu ugu deeqay seddex hay’adood.
5. Dhiig iyo dhuux lafta
“Kala duwanaansho ayaan keeni karnaa haddii aan ku deeqno dhiigeena” ayuu yiri Ronaldo kaasoo weli dhiig ku deeqa iyo sidoo kale dhuux. Waa sababta uusan shabad ugu dhejin jirkiisa.
6. Malaayiin uu ku deeqay
Ronaldo ayaa lacag gaareysa 5 milyan ginni ugu deeqay hay’ada caruurta ee Save the Children ka dib markii uu dhulgariirka ka dhacay dalka Nepal sannadii 2015.
7. Caawinta xarunta kansarka
Ronaldo hooyadiis Dolores Aveiro ayaa ka badbaaday kansarka naasaha sannadii 2017, xiddiga reer Portugal ayaana 120 kun ginni ugu deeqay xarunta baarista dawada kansarka.
8. Agoon ayuu ka farxiyay
Taageeraha Real Madrid Haidar kaasoo ay waalidkiis ku dhinteen qarax ayaa fursad u helay inuu la kulmo Ronaldo ka dib markii wariye maxali ah uu la xiriiray kooxda reer Spain ee Real Madrid.
9. Taageere da’da yar uu caawiyay
Ronaldo ayaa la kulmay, gool u hibeeyay islamarkaana daawadiisa bixiyay Nuhuzet Guillen ka dib markii uu maqlay inuu la ildaran yahay kansar. Nasiib xumo Nuhuzet waxa uu geeriyooday sannadii 2013.
Riix Bogga 2aad si aad Akhriso qeybta labaad ee warbixintaan ee ka hadleysa in CR7 uu yahay xiddiga ugu naxariista badan kubada cagta:
Wargeys Caan Ah Oo Shaaciyay Xiddiga Ku Guuleysan Doona Abaalmarinta Ballon d'Or 2019 Ka Dib Xog Muhiim Ah Oo Ay Heleen
5 responses to “Caawinta Falastiin, Dhiiga Iyo Dhuuxa Uu Ku Deeqo Iyo 18 Arimood Oo Cristiano Ronaldo Ka Dhigaya Xiddiga Ugu Naxariista Badan Dunida”
Ronaldo ceebtaa maahee waa caada daa
ma ninkan baad ag dhigaysaan messi waji kab taagere barca ban ahay lkn wanaga iyo dadnimada ayaa wax lagu qiimeya
1 Kabtiisa Dahabka Ee Yurub 1.2 milyan
2 Ballon d’Or 530 kun ginni
MAA KABTA DAHABKA KA QALISAAN BALLON D’OR KAA YAAA HHHHHHH
Ronaldo wuxu tiisa ka horaysiyay ta dadka kale waa sababta uu uliiciyahay qofka for kale cawiyana walaga abal mariya waa ciyartoy dhamaystiran waxan ugu ducaynaya in illahy dinta islamka kuso hanuuniyo
waa nin dareema marwalba dhibaatooyinka dadka kale waana sababta ka caawisa marwalba inuu hore usocdo. waxaa u hadhay inuuu fahmo diinta xaqa ah oo soo islamo